''ဖြစ်ချင်တာတွေကိုချည်းပဲ အသေဆုပ်ကိုင် မဆွေးနွေးကြပါနဲ့။ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ?? - Yangon Media Group
”ဖြစ်ချင်တာတွေကိုချည်းပဲ အသေဆုပ်ကိုင် မဆွေးနွေးကြပါနဲ့။
နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကျိုးနဲ့ အနာဂတ် ဖူးပွင့်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်ကလေး တွေအတွက်
အခုချိန်မှာဆိုရင် တကယ့်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက် လို့ရော၊
ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့
မျိုးစေ့တစ်ခု ချသင့်တဲ့အချိန်မို့ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ လုပ်ကြပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်”
မေး-ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့အစိုးရ နဲ့ NCA-S EAO ခေါင်းဆောင်များသီး သန့်အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်မှာလုပ် ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ အရင်က အဲဒီအစည်း အဝေးကို ပုပ္ပါးမှာလုပ်မယ်လို့စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် နေပြည်တော်ကိုပြောင်းလုပ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေ ကြတယ်။ ဆရာ့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ-လူတွေကတော့ ပုပ္ပါးမှာလုပ်မှာကနေ နေပြည်တော်ပြောင်းတာကို အမျိုးမျိုးအဖုံ ဖုံပြောနေကြတာပဲပေါ့လေ။ တကယ်တော့ ဒီတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲက သူတို့ခေါ်တာက တော့ သီးသန့်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို သုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ ၁ဝ+ ၁ဝ ပေါ့။ အစိုးရရယ်တပ်မတော်ရယ်ဘက်က ခေါင်းဆောင် ၁ဝ ဦး၊ EAO ဘက်ကဆိုရင် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဆယ်ဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆယ်ဦးတို့တွေ့ကြတယ်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စကားနဲ့ ပြောရရင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေတွေ့ဆုံ ကြတဲ့ပွဲပေါ့လေ။ တကယ်တော့ ၁ဝ+၁ဝ ဆိုတာက ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လူဦးရေနှစ်ဆယ်ပဲရှိ တယ်။ ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေမှာ ဒုတိယခေါင်း ဆောင်တွေ အသီးသီးရန်ထားကြတာရှိတယ်။ ဒုတိယခေါင်းဆောင် ဟိုဘက် ၁ဝ ဦး၊ ဒီဘက် ၁ဝ ဦးပဲထားဦး ၄ဝ ဖြစ်သွားပြီ။ နောက် မှာ အလုပ်အဖွဲ့ဆိုတာကရှိဦးမယ်။ ပုပ္ပါးကို လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ တကယ်တော့ ပုပ္ပါးမှာလုပ်သင့်သလားဆိုရင်တော့ လုပ်သင့်တယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အားလုံးအလုပ် တွေအကုန်လုံးပစ်ထားပြီးတော့ အားလုံးပုပ္ပါးကိုရောက်ကြပြီးတော့ အဲဒီမှာပဲ အတူတူအိပ်၊ အတူတူစား၊ လမ်းလျှောက်အတူတူပဲ။ ဆရာတို့စကားနဲ့ပြောရရင် တော့ အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှုတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲပြီးရင်လည်း ကိုယ့်စကားဝိုင်းလေးတွေနဲ့ကိုယ်ပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့ ဟိုမှာကတည်းခို နိုင်တဲ့ဟိုတယ်ကကျတော့ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ပုပ္ပါးမှာ။ တစ်ခုပဲရှိတဲ့အပြင် အခန်းအရေ အတွက်ကလည်းသိပ်မများဘူး။ ဒီပွဲကြီး တစ်ခုလုံးဆိုရင် ဆရာထင်တာကတော့ လူ ၇ဝ၊ ၈ဝ လောက်ရှိမယ်။ တကယ့်လုံခြုံ ရေးဘာညာနဲ့ဆိုမနည်းဘူး။ ဒီမှာနေစရာ မရှိဘူးဆိုရင် အနီးဆုံးဘယ်ကိုသွားရမလဲ ဆိုရင် အနီးဆုံးညောင်ဦးသွားရမယ်။ ညောင်ဦးသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ လူကြီး တွေအတွက်လုပ်ရကိုင်ရတာ သိပ်ပြီးတော့ အဆင်ပြေမယ်လို့မထင်ဘူး။ နေပြည်တော် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရန်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုးမြို့ကြီး ပြကြီးတစ်ခုခုမှာမှ အဆင်ပြေမှာဆိုတော့ ဒီထဲမှာမှ သူတို့နေပြည်တော်ကို နေရေး၊ ထိုင်ရေး၊ သွားရေး၊ လာရေး၊ ဆွေးနွေးရေး ကအစ အဆင်ပြေမယ်လို့ ယူဆတဲ့နေရာ တစ်ခုကို ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ ရွှေ့လိုက်တယ်။ လူဦးရေ ဒီလောက်များများကြီးအတွက်။ နေပြည်တော်မှာကျတော့ ဟိုတယ်အနေ အထားဘာညာကတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲလေ။ ဆရာကတော့အဲဒီလိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်။
မေး-အရင်ကတော့ ဆရာတို့လို နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောကြတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်က ရပ်နေတယ်။ တချို့ ကလည်းရှေ့မတိုးဘဲ နောက်ပြန်ဆုတ်နေ တယ်။ စသည်ဖြင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ကြတယ်။ အခု ၁ဝ+၁ဝ ဆွေးနွေးပွဲပေါ့နော်။ အဲဒါအ ပြီးမှာရော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာ ဘယ်လိုဘယ်နည်းရှိနေပြီလို့ သုံးသပ်မလဲ။
ဖြေ-တကယ်တော့ JICM ဆိုတာရှိသေး တယ်။ NCA အရပေါ့။ JICM တွေ့ဆုံပွဲက တော်တော်လေးကျဲနေတယ်ပေါ့လေ။ JICM မှာ ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေအတွက် ဒီ ၁ဝ+၁ဝ တွေ့တယ်လို့ယူဆတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအထိ အတွေ့ကတော့ ရပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးထက်စာရင်တော့ တုံ့ဆိုင်းသွားတယ် လို့ပြောရင်တော့ မမှားဘူးပေါ့လေ။ အခုလည်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြော သွားတာက ပထမပြောသွားတာကတော့ ၂ဝ၁၈ ထဲမှာတစ်ကြိမ်၊ ၂ဝ၁၉ မှာနှစ်ကြိမ်၊ စုစုပေါင်းသုံးကြိမ်လုပ်ပြီးတော့ ပြည်ထောင် စုသဘောတူစာချုပ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆို တော့ ဒီဟာကဝမ်းသာစရာပါပဲ။ များများ တွေ့ကြတယ်။ များများဆုံကြတယ်။ ပြော ကြတယ်ဆိုရင် မတွေ့ကြဘူး။ မဆုံကြ ဘူး။ မပြောကြဘူးဆိုတာထက်တော့ တွေ့လိုက်၊ ဆုံလိုက်၊ ပြောလိုက်လို့ရတာ ပေါ့။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါကအစိုးရရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်လို့ ဒါယေဘုယျပြောလို့ရတယ်။ ကာချုပ်ကြီးရဲ့ ပြောကြားချက်ကိုကြည့် တော့ ဒါကတပ်မတော်ရဲ့ သဘောထားကို တရားဝင်အသိပေးလိုက်တာ။ ဖထီးရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကို သူကပွင့်လင်းစွာပြော တယ်ဆိုတာကို သုံးခုကိုခွဲလိုက်တာပေါ့။
ဆိုတော့ မေးခွန်းကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင် ဒီ ၁ဝ+၁ဝ တွေ့ဆုံပွဲကနေပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီ JICM တွေဘာတွေအထိတွေ့ဆုံပြီးတော့ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့။ ဆရာ့ရဲ့ သဘောကတော့များများတွေ့ပါ။ များများတွေ့ရင်တော့မြန်မြန်အဖြေထွက် တတ်ပါတယ်။ များများတွေ့တယ်ဆိုတဲ့နေ ရာမှာ တွေ့ပုံတွေ့နည်းကို ဆရာကနှစ်မျိုး ရှိတယ်။ တစ်မျိုးကတော့အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံမှု၊ နောက်တစ်ခုကတော့ တရားဝင် တွေ့ဆုံမှုပေါ့။ အခုတွေ့တာကတော့ တရား ဝင်တွေ့ဆုံမှုပေါ့နော်။ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံမှုတွေလည်း တွေ့စေချင်တယ်။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလွတ်သဘောများများ တွေ့ပြီးတော့မှ တရားဝင်တွေ့လို့ကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တရားဝင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ တစ်ခုခုပြောတဲ့အခါမှာ ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာ ပြန်ပြီးတော့ တုံ့ပြန် ပြီးဆွေးနွေးတာတို့ဘာတို့လုပ်ရမယ်ဆိုရင် ဆရာတို့ ဒီနိုင်ငံကလူတွေရဲ့သဘောသဘာဝမှာ မျက်နှာနာတယ်တို့၊ အားနာတယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေရှိတော့ အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံ မှုတွေများများလုပ်စေချင်တယ်။ အဲဒီကနေ ပြီးတော့သွားရင်တော့ ခုနပြောသလို ဒါမျိုး ဆိုတာကတော့ အခုရေတွင်းတူး၊ အခုရေ ကြည်သောက်ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်သေး ဘူး။ ခဲယဉ်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
မေး- ၁ဝ+၁ဝတွေ့ဆုံပွဲမှာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတာက ခွဲမထွက်ရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်က ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတော့ ဒီအပေါ်မှာတစ်မျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်။ နောက် EAO တွေဘက်ကတစ်မျိုးပေါ့။ ဆို တော့ ဆရာ့အနေနဲ့ တစ်ခုချင်းစီအပေါ် ဘယ်လိုမြင်မိလဲ။
ဖြေ- မိန့်ခွန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အစိုးရက အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပုံစံ မျိုးတွေ့ရတယ်။ တပ်ကတည်း တပ်ရဲ့ သဘောထားတင်ပြချက်ပုံစံမျိုး တွေ့ရ တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တင်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ တပ်ချုပ်နဲ့၊ ဖထီးတို့က မတူကွဲပြားတဲ့ပုံစံ နဲ့ သူတို့ရှုထောင့်ကနေ သူတို့ပြောသွားတယ်။ တစ်ထပ်တည်းတော့ မတူနိုင်ဘူး။ တူတာတွေလည်း တချို့ဟာတွေထွက်လာတယ်။ ဥပမာ- ဆိုကြပါစို့။ တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံတိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ တပ်မတော်ဆိုတာ တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတပ်မတော်ရဲ့ရှေ့မှာ နာမဝိသေသနပေါ့၊ ထိုသို့သော… ထိုသို့ဖြစ်သော တစ်ခုတည်းသောတပ်မတော်၊ စသည်ဖြင့်တော့ တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်ရဲ့ ဝိသေသကို ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ ထည့်သွင်းပြောဆိုတာတွေကတော့ ရှေ့မှာ ဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းရမယ့် ကိစ္စတစ်ခု လို့ ယေဘုယျမှတ်ယူပါတယ်။ သို့သော် တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်ဆိုတဲ့စကား ရပ်ပေါ်မှာ သဘောတူကြတယ်လို့ ကြား သိခဲ့ရတာကတော့ ဝမ်းသာစရာပါ။
ဆရာတို့ကတော့ ဒီအစည်းအဝေးတွေတက်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအစည်းအဝေးခန်း တံခါးဝကနေပြီးတော့ တစ်ခါတလေလျှံ ကျလာတာတွေကို ကောက်နှုတ်ပြီးတော့ ဖြေရတာကိုး။ ဖထီးကကျတော့ ဘုံနိုင်ငံ ရေးရည်မှန်းချက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုသုံးသွားတယ်။ ဘုံနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူက လေးချက်ကို ဟိုက်လိုက်လုပ်သွားတယ်။ သူလုပ်တဲ့နေ ရာမှာ သူကလည်း တို့တာဝန်အရေးသုံး ပါးကို နံပါတ် (၁) အနေနဲ့ ဟိုက်လိုက်လုပ်တယ်။ တစ်ဖက်က တပ်ချုပ်ပြောတဲ့အထဲမှာလည်း တို့တာဝန်အရေးသုံး ပါးပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ တန်းတူညီမျှရေး၊ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု လောကပါလ တရားသုံးပါး။ ဒီနှစ်ခုဟာ ပြောရရင် NCA မှာပါထားပြီးသား။ နောက်တစ်ခုကတော့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်။ နောက်ဆုံး တစ်ခုကတော့ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူ ညီမျှရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရေး။ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရေးမှာတော့ အယူအဆ တွေကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကတော့ တူမျှချင်မှ တူမျှမယ်ပေါ့လေ။
ဒီနေရာမှာ ဆရာ့ရဲ့အမြင်ကို ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာ ပေးသင့်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ ဘာ သာစကားတွေ မတူကွဲပြားတာတွေရှိပါ တယ်။ မတူကွဲပြားမှုကို အတင်းကြီးတူ အောင်ညီအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထက် စာရင် ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်ဒေသနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် တွေနဲ့ အုပ်ချုပ်တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ဆရာ ထင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာကိုတော့ဆရာက သဘောတွေ့တယ်။ နောက်တစ်ခါ တပ်ချုပ်ပြောတာကို ပြန် ပြီးတော့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ တပ်ချုပ်ကြီး အထူးသဖြင့် ခွဲထွက်မယ့်ကိစ္စပေါ့။ တစ်ဆို့သွားတာလည်း ဒီစကားရပ်ပေါ့။ ဒီ စကားလုံးအပေါ်မှာပဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အငြင်းပွားကြတယ်ပဲပြော ပြော၊ ဘာပဲပြောပြောရှိတယ်။ အဲဒီခွဲ ထွက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ဖက်က နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွား တာကတော့ ဒါကိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးပြောသွားတယ်။ တပ်မတော်ဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အထိအခိုက် မခံဘူး။
ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း တပ်မတော်က တိတိလင်းလင်းပြော တယ်။ ထို့နည်းတူစွာပဲ သူကငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ရမှာကိုလည်း သမိုင်းပေးတာဝန် လို့ သူသုံးသွားတယ်။ တပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က။ ဒါ့အပြင် ၂ဝ၂ဝ မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီး ပြီး မြောက်စေရေးအတွက် သန္နိဋ္ဌာန်ချထား တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သူကသုံးထား တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတယ်ဆို တာက ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူက ဘယ် သူလဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူက တပ်မ တော်ရဲ့ ဒီနေ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးဖြစ်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီး ရင် အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့နောက်မှာ စီမံချက်ဆိုတာလာရတယ်။ စီမံချက်ဆိုတဲ့ နောက်မှာမှ ဘာဆက်လုပ်ရလဲဆိုတော့ အောင်မြင်အောင်ရေးဆွဲပြီးတော့ လုပ်ကြကိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒီဟာကို သေသေချာချာ ပလန်တွေချထားပြီး ဖြစ်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ယေဘုယျသတ်မှတ်ပါတယ်။ ၂ဝ၂ဝ မှာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူထုတောင့်တနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ပြည်သူလူထုလက်ထဲကို အပ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးလည်းပါပါတယ်။
အဲဒါကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးက ပုထုဇဉ်လူသားပဲ။ ပုထုဇဉ်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက် ပုထုဇဉ်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာ။ ဒီတိုင်း ပြည်ကြီးမှာ ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်မှု နောက်ကျနေတယ်လို့သုံးသပ်မိရင်း လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာအနေနဲ့ လိုအပ်မယ်လို့ သူသုံးလိုက်တာဖြစ်မယ်။ လူတွေကတော့ မျိုးစုံဝေဖန်မှုတွေတော့ ရှိလာနိုင်တာပေါ့လေ။ ရှေ့ကအခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် တပ်မတော်ရဲ့ပုံရိပ်ကျဆင်းခဲ့တာလေးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ ဒီကျဆင်းခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်း မြှင့်တင်လို တဲ့ဆန္ဒလည်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးနဲ့ ဒီကနေ့ တပ်မတော်အရာရှိကြီးတွေမှာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကိုကတော့ အရှိသဘော၊ ပကတိသဘော ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့်မို့လို့ ဒါပကတိပေးထားချက်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကိုတော့ ဆရာတို့အသိ အမှတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်။ သူပေးချင်တယ်ဆိုပေမယ့် အခက်အခဲတွေ၊ အတားအဆီး တွေ ဖြတ်သန်းရမှာတော့ သေချာတယ်။
တကယ်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖက်ဒရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးလို့ရတာမျိုး၊ တောင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒါကတကယ်တော့ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တည်ဆောက်ရမယ်ဆို ပြီးတော့လည်း တပ်ချုပ်မိန့်ခွန်းရဲ့အချို့ကိုထုတ်နုတ်ပြီးတော့ ပြောကြားရမှာဖြစ်သလို၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကျပြန် တော့ သူပြောသွားတယ်။ အနာဂတ်ပြည် ထောင်စုကိုပုံဖော်မယ့် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူပြော သွားတယ်။ ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုပုံ ဖော်ချင်သလဲဆိုတဲ့အခါမှာ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာအိပ်မက်တစ်ခုပဲ။ အဲဒီဖက်ဒရယ် အိပ်မက်က တစ်ဖက်မှာရှိသလို အခြား တစ်ဖက်မှာလည်း ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကလည်း အခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေသေးတယ်။ ဒီဘက် နှစ်ဖက်ရဲ့ ကြားကနေပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု ကြီးကိုပုံဖော်မယ့် သဘောတူညီချက်ရ အောင်ယူရမယ်ဆို တဲ့အချက်တစ်ချက် သူ ပြောတယ်။ နောက်တစ်ချက်က တာဝန်ယှူု၊ တာဝန်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သတ္တိရှိ ကြပါလို့လည်း သူပြောသွားတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြော သွားတယ်။ သူက သုံးခုပေါ့။ ယေဘုယျ တော့ ဆရာတို့ ဒီလိုထုတ်နုတ်ပြီးတော့ သုံးသပ်လို့ ရတာပေါ့။
မေး- ၂ဝ၂ဝ မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြည်သူတွေဆီ အရောက်အပ်နှံမယ်ဆိုတဲ့ တပ် မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆရာ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုအမြင်ရှိလဲခင်ဗျ။ ဖြစ်တန်ခြေရှိတဲ့ ပြောဆိုမှုလား။ တကယ်ဖြစ်သွားနိုင်သလား။
ဖြေ- ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကြီးရဲ့ ပထမ လှေကားထစ်ဖြစ်တဲ့ NCA ပေါ့။ လက်မှတ် ထိုးပြီးသား ဒီ ၁ဝ+၁ဝထဲက ၁ဝ တစ်ဖက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ FPNCC မှာ ခုနစ်ဖွဲ့ရှိ သေးတယ်။ ဒီပွဲကို ခုနစ်ဖွဲ့က ကြိုဆိုတဲ့စာ တွေ ဘာတွေထုတ်တာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဝမ်းပမ်းတသာနဲ့ ဒီ ခုနစ်ဖွဲ့ကိုလည်း ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ဒီခုနစ် ဖွဲ့မှာ တစ်ခုပဲ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်က NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က ဆန္ဒပဲစောသွားသ လား၊ တကယ်ပဲ သူတို့မှာ ပလန်တစ်ခုများ ရှိသလားတော့မသိဘူး။ NCA မဟုတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းကနေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ သူတို့ကပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဒီဟာလေးတွေကြောင့်လည်း မကြန့်ကြာ စေချင်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မြေပုံကြီးကို ပြန် ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် NCA လက် မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ FPNCC ရှိနေတဲ့ နေရာဒေသအများစုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ အခြေချတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေဖြစ်တယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာတို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာလည်း တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍကို ဘေးဖယ် ပြီးတော့ စဉ်းစားလို့မရတဲ့အချက်တစ်အနေနဲ့ စဉ်းစားဖို့လိုမယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ တရုတ်ကို အလွန်ကိုမနေရမယ်။ ဒီလို မျိုးဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူလည်း အ ချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်သ လို၊ ကိုယ်လည်း အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမျိုးနယ်စပ်မှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ နိုင်ငံနယ်စပ်မှာလည်း ထိုက်သင့်သလောက် အေးချမ်းမှုဆိုတာ မရှိနိုင်ဘူး။ နောက် IDP တွေ၊ စစ်ရှောင်စခန်းကလူတွေကို လည်း ပြန်ပို့ရဦးမယ်။ အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်းတွေ ရှာပေးရမယ်။ စာသင် မယ့်သူတွေဆိုလည်း ကျောင်းပညာသင် ဖို့ကိစ္စတွေ၊ လယ်ယာလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေ ဆိုလည်း သူတို့လုပ်ကိုင်ဖို့ လယ်တွေ၊ ယာတွေ၊ မြေကွက်တွေ၊ နေစရာအိမ်တွေ စသည်ဖြင့် လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ကတော့ အများကြီးပဲ။ ၂ဝ၂ဝ မှာ အလွန် ကို တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆို လို့ရှိရင် နည်းနည်းများ လစ်ဟာမှုများဖြစ် သွားမလားပေါ့။ တကယ်မှန်ကန်တဲ့၊ တ ကယ် အေးချမ်းတဲ့ဟာ တစ်ခုကိုရဖို့က တော့ နည်းနည်းများ အခက်အခဲရှိမလား လို့တော့ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်မိတာတော့ ရှိပါ တယ်။
မေး- ဒီဘက်ကလည်း NCA လမ်း ကြောင်းကပဲသွားမယ်လို့အတိ အလင်း ပြောပြီးပြီဆိုတော့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ ဝင်လာနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေ ရှာဖို့လိုလဲ။ NCA လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာနိုင်မလား။
ဖြေ- ပရိုတိုကော ဆိုတာကြီးကလည်း ရှိ နေသေးတယ်။ အခုလိုပွဲတွေ (၁ဝ+၁ဝ ပွဲ) မျိုးမှာ အကုန်လုံးမတက်လာနိုင်တာကိုလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ အကုန်လုံး တက်လာစေချင်ပါတယ်။ ထို့နည်း တူစွာပါပဲ နည်းနည်းလေးပေါ့လေ။ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဖြစ်တာလား။ မေ့များကျန်ခဲ့ ကြတာလားတော့မသိဘူး။ နိုင်ငံရေးပါတီ တွေရဲ့ကဏ္ဍကလည်း မှေးမှိန်နေတယ်။ ဒီလိုပွဲတွေမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်း ပါစေချင်တယ်။ ဒီလိုပွဲတွေဆိုတာက ကိုယ်မတွေးတဲ့အတွေးကနေ အခြားလူ က တွေးလိုက်မြင်လိုက်တာကလည်း အလွန်ကောင်းရင်ကောင်းသွားနိုင်တယ်။ လက်မှတ်ထိုးပါဆိုတာက ဒါက အခြေခံပဲ။ ဥပမာ UWSA နဲ့ NDA ပေါ့လေ။ သူတို့ဆိုရင် တပ်မတော်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမရှိဘူး။ သူတို့က ဘယ်လိုမြင်လဲဆို တော့ သူတို့က တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့သူတွေ မ ဟုတ်လို့ လက်မှတ်ထိုးစရာမလိုဘူးလို့ ယေ ဘုယျပြောချင်ပြောကြမှာပေါ့။ ဆိုတော့ အဲဒီအဖွဲ့တွေက အစိုးရနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ ပြီးတော့ လုပ်သလား။
သိရတာကတော့ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်အထိ အဓိက ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့လုပ်တာကတော့ တပ်မတော် နဲ့ပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တပ်မတော်နဲ့ သူ တို့နဲ့ကြားမှာလည်း အယူအဆလေးတွေ တချို့နေရာတွေလည်း နည်းနည်းလောက်လွဲပုံရပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ဆရာတို့ ငယ်ငယ်ကဖတ် ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးလိုပဲ။ ဖိုးလမင်းလည်း သူ့အလင်းနှင့် အဆင်းနှင့်ဆိုသလိုပဲ။ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ စွမ်းရည်ကိုယ်စီ ကိုယ်ငှ ရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အားလုံး အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်း မိမိဖြစ်ချင်တာ။ မိမိလုပ်လိုတာကို အသေဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ လုပ်ခဲ့တာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်း ကြောင်းမှာရော၊ နိုင်ငံတကာမှာရော ကြည့် လိုက်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုမရှိနိုင်ပါဘူး။ အလျှော့ပေးရတာတွေဆိုတာရှိတယ်။ ဒီမှာလည်း နှစ်ဖက်အလျှော့ပေးမှုတွေရှိ စေချင်တယ်။ ဖြစ်ချင်တာတွေကိုချည်းပဲ အသေဆုပ်ကိုင် မဆွေးနွေးကြပါနဲ့။ နိုင်ငံ တော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးနဲ့ အနာ ဂတ် ဖူးပွင့်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်ကလေး တွေအတွက် အခုချိန်မှာဆိုရင် တကယ့် ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရော၊ ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မျိုးစေ့တစ်ခု ချသင့်တဲ့အချိန်မို့ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ လုပ်ကြပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး- ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိ ရင်ပြော ပေးပါဦး။
ဖြေ- အခု ၁ဝ+၁ဝ ကတော့သွားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ တံခါးတစ်ချပ် ပွင့်တယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။ ကြားသိချက် တစ်ချက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လာ မယ့် ၁၁ လပိုင်းရက်နှစ်ဆယ်နောက်ပိုင်း မှာ အခုလိုပဲ တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဟိုက ဒီက အသံတစ်စွန်းတစ်စ ကြားရပါတယ်။ ဒါကတော့ သတင်းအနေ နဲ့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြားသိမှုကို မျှဝေတာပါ။ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုပါတယ်။ အခုလုပ်တဲ့ပွဲနဲ့ အဲဒီကြားထဲမှာ တော့ အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှုတွေများ များလုပ်လို့ရှိရင်တော့ ရလဒ်တွေ မြန်မြန် နဲ့ ကောင်းကောင်းထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ တရားဝင်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာတော့ အချို့ကိစ္စတွေမှာ တရားဝင်မို့လို့ဆိုပြီးတော့ မပြောသင့်ဘူးတို့၊ ပြောရမှာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မပြောသင့်ဘူး၊ ပြောရမှာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ ထက်စာရင်အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှု တွေမှာ ပြောကြရင်းနဲ့ တရားဝင်တွေ့ဆုံ မှုတွေမှာတင်ပြီးတော့ လုပ်နိုင်မယ်ဆို ရင်တော့ ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်ရော၊ နိုင်ငံသားတွေအတွက်ပါ ကောင်းမယ့် ကိစ္စတွေပါပဲ။
ဆရာ ပြောပါဆိုရင် ပြောချင်တာကတော့ အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှုတွေများများလုပ်ပါ၊ ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုပဲ များများ ကြည့်ကြပါ။ မိမိနဲ့မိမိရပ်တည်နေတဲ့ အစုအဖွဲ့၊ မိမိပါဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအရေးကို တင်မယ်၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား တွေ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း၊ ဒီကိုယ်ကျိုးစီးပွား တွေအပေါ် မစွန့်လွှတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ဆရာတို့တိုင်းပြည်ကြီးက ခုနကပြောတဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေက တော်တော်၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးရော၊ ဒီမိုကရေစီရေးရော၊ ဖက်ဒရယ် ရေးရော တော်တော်အလှမ်းဝေးသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ဘန်ကောက်-မဲဆောက် ခရီးသည်တင် ယာဉ်တစ်စီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ သစ်ပင် ဝင်တိုက်ပြီး မီးလောင်မှု??
သီတင်းကျွတ် ပိတ်ရက် ရန်ကုန်မှ နယ်ပြန်မည့်သူများ အဝေးပြေးကား မလုံလောက်ပါက YRTA မှ ကားများ ဖြည်??
စီရော်နယ်ဒို တစ်ဦးတည်းကို အာရုံစိုက်မည် မဟုတ်ဟု ကိုတက်စ်ပြောဆို၊ ဆွာရက်ဇ် – ကာဗာနီ အတွဲကြ?
ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်လျက်ရှိသော ဖိအားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ပြည်သူနှင့်အတူ အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ေ
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အသိအမြင်ဖွင့်မှု မြှင့်တင်ပေးမည့်